Cabdalla Cabdalla “NISA waxaa laga leexiyay hadafkii laga lahaa” – Madal Furan
Hoy > Warka > Cabdalla Cabdalla “NISA waxaa laga leexiyay hadafkii laga lahaa”
Cabdalla Cabdalla “NISA waxaa laga leexiyay hadafkii laga lahaa”
Muqdisho (Madal Furan) Taliye ku-xigeenka Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya General Cabdalla Cabdalla Maxamed oo la hadlay VOA-da ayaa wuxuu sheegay in Hay’adda NISA laga leexiyay hadafkii laga lahaa ee ahaa la dagaalanka Argagixisada.
Agaasimaha Hay’adda NISA Xuseen Cismaan Xuseen ayaa 16-kii July ee sanadkan shaqada ka joojiyay Agaasime ku-xigeenada NISA S/guuto Cabdalla Cabdalla Maxamed iyo G/sare C/qaadir Maxamed Nuur (Jaamac), iyada oo ugu dameyn wareegto ka soo baxday xafiiska Madaxweynaha 16-kii bishan xilka looga qaaday.
Wuxuu sheegay Hay’adda in hada loo adeegsado in lagu dhibateeyo xubnaha ka tirsan dowladda ee mucaaradka ah, islamarkaana si qalad ah lagu xiray xubno Hay’adda ka tirsan oo qaarkood markii dhibaatadaas ay arkeen ka cararay dalka.
Sidoo kale General Cabdalla Cabdalla oo mudo Lix sano ka ahaa Taliye ku-xigeen NISA ayaa sheegay inay aad u yar tahay arrinta xog uruurinta Hay’adda iyo qibradaha iyo aqoonta ay u leedahay cadowga.
“Arrintan xog uruurinta Hay’adda iyo qibradaha loo leeyahay cadowga way xadididneed, laakiin Hay’adda mudooyinkii la soo dhaafay waxay bilowday in xog la uruuriyo, Hawlgallo la sameeyo, si loola dagaalamo cadowga Argagixisada Al Shabaab iyo Daacish, maxaa yeelay cadowga aan la dagaalameynay wuxuu ahaa cadow muuqda”. Ayuu yiri Cabdalla Cabdalla.
Ciidankii NISA ee Booliska loo wareejiyay ayuu soo hadal qaaday, wuxuuna sheegay in lagu deg degay arrintaasi, maadaama nidaam iyo deganaansho aan lagu wareejin ciidanka oo qaarkood ilaa hadda ay mushaaradood ka maqan yihiin.
Cabdalla Cabdalla ayaa sheegay ilaa hadda inaanay jirin cid u sheegtay in shaqada laga joojiyay iyo sababta looga joojiyay, keliyana uu ka arkay baraha bulshada, ugu dambeyna sidaasi xilka looga qaaday.
Boosaska ay baneeyeen Cabdalla Cabdalla Maxamed iyo C/qaadir Maxamed Nuur (Jaamac) ayaa Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu bartamihii bishan u magacaabay Fahad Yaasiin oo noqday Agaasime ku-xigeenka Hay’adda NISA iyo Sirdoonka Qaranka, isaga oo aan horey u laheyn darajo ciidan.
Shirka Kismaayo, Digsi Dab Saaran oo Cunto-kariyayaal Badani Walaaqayaan.
Daagl beeleed mar kale ka dhex qarxay beelaha Bahararsame iyo Qayaad deegaanka dhumay ee gobolka Sool